Ungayitshintsha njani i-Gasket kwiSango lakho lesiFriji
NguGary Hedstrom, uPeg Hedstrom, uJudy Ondrla Tremore
Ukuba indawo yakho yokutya efrijini ifudumele kakhulu, isisombululo esinye esilula kunokuba kukutshintsha i-gasket yerabha ejikeleze umnyango. Inokuba igugile okanye yolulwe kangangokuba ayitywine. Iigaskethi zibotshelelwe emnyango ngezikrufu okanye ngentsimbi okanye ngeplastikhi yokugcina. Udinga i-screwdriver kunye ne-gasket yokubuyisela kwivenkile yezixhobo.
I-gasket entsha iya kusongwa xa uyifumana. Unokuyilungisa ibhendi ngokuyishiya elangeni-ngaphezulu kwe-hood yemoto-okanye uyincamathisele epanini yamanzi abilayo. Ngokucacileyo indlela yokuqala izakuthatha ixesha; ezinye iindlela unokuyifaka kwangoko. Nantsi into enokuyenza:
Vula umnyango unyuse irabha phezulu emnyango.
Ipilisi emhlophe engqukuva engama-627
Kuya kufuneka ukuba usebenze kancinci ukukhupha i-gasket endala. Musa ukudimazeka. Uya kufumana ukuxhoma kwayo.
Khulula, kodwa ungakhuphi, izikrufu ngaphezulu ezibambe i-gasket endaweni yayo.
Ufuna ukubakhulula ngokwaneleyo ukuba bayikhulule i-gasket kodwa bangawi.
ii-advair discs ezingama-250/50
Yiya ecaleni komnyango kwaye ukhulule izikrufu apho.
Musa ukuya ngaphantsi kunesiqingatha sendlela.
Phinda iNyathelo 3 kwelinye icala.
Buyela phezulu phezulu emnyango ukuze ufumane umgca obambe i-gasket endaweni. Yiplastiki okanye isinyithi.
Tsala i-gasket kuqala, emva koko uphume uye kuwe.
Ukuvumela i-gasket endala ukuba ixhonywe, yenza i-gasket entsha emnyango, uthelekise imingxunya yayo nezikrufu emnyango.
Ukuba ubeka iCrisco okanye into efana negrisi ebhantini, iya kuhamba ngokulula.
Iiphelo ezinde zegasket entsha ziya kujinga emacaleni. Uya kubakhawuleza ngokukhawuleza. Qiniseka nje ukuba into ejingayo inde ngokwaneleyo ukuba ilingane kuyo yonke indlela ejikeleze umnyango. Ukuba kukho naziphi na izithuba xa ugqibile, uya kuyenza yonke le nto kwakhona. Ukuba ayenziwanga kakuhle, umoya ofudumeleyo uyakungena kwifriji kwaye umoya obandayo uya kuphuma.
Ukubuyela emva phezulu, tyhala i-gasket entsha phantsi kwesigcini.
Yenza into efanayo kwicala elivulayo.
Qhoboshela izikrufu esecaleni ukuba kukho enye into okanye ubeke enye gasket phantsi kwemigca yokugcina.
Umlinganiselo we-zolpidem 20 mg
Sebenzisa indlela yakho ezantsi, kuqala icala elinye emva koko ulisuse elinye, ususe i-gasket enkulu kunye nokutyibilika kwindawo entsha.
Qhubeka ujonge ukuba iziphelo ezijingileyo zegasket entsha ziya kudibana emazantsi. Ngelixa usebenza, musa ukuqinisa izikhonkwane ngokuqinileyo kuba kuya kufuneka uphinde onke amanyathelo ukuba ufumanisa ukuba kukho isikhewu.
Xa iigaskethi ezisecaleni zijijekile ngaphakathi, sebenzela ukufumana i-gasket kwikona emva kokuba indala iphumile.
Ipilisi emhlophe engqukuva m
Ukusebenza embindini weziko lomnyango, gqibezela ukufaka i-gasket.
Hlola i-gasket ukuqinisekisa ukuba ingena ngokuqinileyo kuyo yonke indawo xa ucango luvulekile naxa luvaliwe.
Jonga ukuba ijikeleze iikona. Ukuba ufumana isithuba okanye ukujija, buyela kuyo uze ufake kwakhona i-gasket.
Ukucoca i-gasket xa ithe yangunda, sebenzisa inxenye enye ye-bleach kwiindawo ezine zamanzi kwaye ukhuhle igasket ngebrashi yamazinyo endala. Ungayigcina iruble eyongezelelekileyo ukuba uyigcoba ngeoyile yelamuni, ioyile yezimbiwa, okanye into yokuthambisa umzimba. Qiniseka, nayo, ukosula iidriphu kunye nokuchitheka.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-thc
Ungasifaka njani isicatshulwa kwigama
Iipillips zempilo ze-phillips colon
ipilisi eluhlaza s 90 3
z * kwisithuba sokuzithemba sama-99
yenza uluhlu kwi-c ++